पूर्वी मानिसहरूका चिया पार्टी मा - एक वास्तविक अनुष्ठान, राष्ट्रिय परम्परा अनुपालन मा प्रत्येक समय गरिन्छ जो। चिया गर्न विशेष सान्दर्भिकता को तुर्क देखाउँछ। टर्की, नास्ता, भोजन र खाने को लागि जरूरी पेय को तयारी पूरा भयो। पनि तातो मौसममा तुर्क तिर्खा तातो बलियो चिया निभाउन। यस प्रक्रियामा मुख्य कुरा चिया को टर्की कप कब्जा गरिएको छ।
टर्क प्रत्येक बिहान एक कप चिया सुरु। परंपरागत, यो पेय विशेष कप टर्की, Armudu भनिन्छ देखि पिएको छ। तिनीहरूले साना, नासपाती आकारको ग्लास कन्टेनर छन्।
चिया को टर्की कप आफ्नै इतिहास छ। त्यहाँ Armudu सिद्ध प्रेम प्रतीकको रूपमा सिर्जना एक पौराणिक कथा छ। कवि र रोमान्स फूल को अविश्वसनीय सौन्दर्य यो भावना तुलना गर्नुहोस्। त्यसैले Armudu एक Tulip कली को आकार पाए। मध्य एशिया मा एक लोकप्रिय वृक्ष - केही इतिहासकारहरूले आफ्नो फारममा नासपाती फल पत्थर एक गिलास जस्तो तर्क।
आज, Armudu देखि चिया पिउने बरु एक परम्परागत चरित्र छ र टर्की राष्ट्रिय संस्कृति को भाग हो। चिया को टर्की कप पनि विदेशी पर्यटक ध्यान आकर्षित विषयको भएका छन्। प्रत्येक समयमा यात्री टर्की मा आफ्नो रहन प्रयास र सेट वास्तविक चिया कप किन्न प्रयास गरिरहेको छ।
Armudu - एक गिलास नासपाती आकारको, पारदर्शी सिसा को गरे। यो पातलो, अलिकति बीचमा पर्खाल र एक मोटी व्यापक तल संकुचित भएको छ। देखिन्छ जस्तै कुनै पनि गिलास को टर्की चिया।
फारम Armudu व्यावहारिक र प्रयोग गर्न सहज छलफल। कारण आफ्नो हातमा आराम ग्लास को tapered किनारा गर्न। उहाँले पर्ची छैन र पनि तेज आन्दोलनहरु पर्दैन जब। विशेष आकार पनि पीसा चिया को palatability सुधार गर्न मद्दत गर्छ। कचौरा को संकुचित भाग गर्मी पनि कायम रहन्छ।
मा पूर्वी ग्लास पेय लागि लामो समय कायम रहन्छ यसको स्वाद। मानिस पिउने टर्की चिया पूर्णतया हर्बल फूलगुच्छा सबै टिप्पणीहरू महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
टर्की चिया कप ह्यान्डलहरू छ। Armudu चिया बेला "कमर" को लागि राख्नुपर्छ।
भोल्युम 100 एमएल बेकर छ। यसको सानो क्षमता भए तापनि Armudu शीर्ष सम्म भरिएको छैन। तुर्क माथि 1-2 सेमी छोड्न निर्णय गरे। केही Armudu मा स्थान रिम द्वारा संकेत गर्नुभयो। ग्लास मुक्त टुक्रा लोकप्रिय भएको ओठ लागि ठाउँ भनिन्छ।
मिति, टर्की कप विभिन्न सामाग्री देखि गरे। सबै भन्दा साधारण क्लासिक Armudu बेरंग ग्लास बनेको हो। दैनिक लागि यस्तो चश्मा टर्की चिया प्रयोग गर्नुहोस्। बिदा र उत्सव Armudu देखि चिया पिउन समयमा बहु-रंग रेखाचित्र वा सुन ढाँचाको संग सजाया।
सबैभन्दा महंगा क्रिस्टल, चाँदी र सुन Armudu छन्। द्वारा सरल व्यञ्जन ग्लास, बरतन र चीन कप बनेको छन्।
प्राप्त अतिथि धेरै जोडी Armudu saucers र ट्रे को निर्वाचकगण, टर्की चिया को चश्मा को एक सेट प्रयोग गर्नुहोस्। यस्तो किरा रंगीन र क्लासिक डिजाइन दुवै हुन सक्छ।
कसरी Armudu देखि चिया पिउन
टर्की राय एक गिलास - सबै भन्दा राम्रो क्षमता साँचो स्वाद र चिया को स्वाद व्यक्त गर्न सक्षम। Armudu देखि सामान्यतया कालो पिउन लामो पात चिया। यो धेरै चरणहरु मा पीसा छ:
को teapot सही ड्राई चिया को तातो पानी को आधा आवश्यक रकम रकम मा हालिएको।
एक ढक्कन संग कन्टेनर कवर र 2-3 मिनेट को लागि छोड।
उम्लिरहेको पानी teapot को दोस्रो आधा मा गरे र केही मिनेट लागि फेरि छोड्नुहोस्।
चश्मा मा खन्याउन पिउन तयार छ।
Armudu एक प्वाला मा सेवा गरे। चीनी, जाम र मह अलग सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा तुर्क को गांठ चीनी रुचाउँछु। आफ्नो हल्कासित स्वाद पेय पिउने, चिया र चबाने मा डूबा।
Armudu साँघुरो भाग को औंठी र forefinger लिन र प्वाला देखि हटाउने बिना उसको बोलीले यसलाई ल्याउन निर्णय गरे। कहिलेकाहीं सुविधा धारकहरुको लागि प्रयोग।
चिया समयमा teapot तालिका छ। मालिक चियाको भरना प्रदान गर्दछ।
यो चिया को अवधि असीमित छ। र घर को प्रक्रिया मास्टर वा कम्पनी बाट सबैभन्दा वरिष्ठ व्यक्ति डोऱ्याउनुपर्छ।
टर्की, चिया बिना घरमा आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य को हरेक अतिथि प्रस्ताव गरिएको छ। मालिक चिया एक अतिथि आमन्त्रण गर्दैन भने, यो पछिल्लो एक खराब सम्बन्ध प्रमाण छ।
विवरण झोला: आकार, आकृति, लोकप्रिय मोडेल
कार मा odors हटाउन कस्तो छ?
व्यावसायिक मिक्सर ग्रह। चयन र समीक्षा लागि सुझाव
SHmorlja हर्निया: उपचार। हर्निया SHmorlja को निदान को प्रकार
कसरी आफ्नै हातले प्रतिमा बनाउन - izgovovleniya विकल्प (सरल र जटिल)
Samsung लहर3स्मार्टफोन: एक अवलोकन, सुविधा र समीक्षा
स्पेन आकर्षण। जिरोना फोटो र शहर बारे समीक्षा
थिएटर "समकालीन" Yauza: को थिएटर मुग्ध पार्ने संगीतको, troupe
लूप्सको संख्या कसरी गणना गर्ने? शुरुवातका लागि सुई बुनाई संग बुनाई
Holt Oram सिंड्रोम। को सिंड्रोम "हात-को हृदय"
गाह्रो छ, तर मलाई आश्चर्य: कसरी ओवन मा एक पाइक खाना पकाउनु
वर्णन, कारण, उपचार र सल्लाह: वयस्क र बच्चाहरु मा पछाडिको rhinitis
रूसी इतिहास सार्वजनिक बिदा।